Fananganana fanoherana ny pasipaoro vaksiny anatiny any UK
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any UK » Fananganana fanoherana ny pasipaoro vaksiny anatiny any UK
Antenaina fa ny praiminisitra anglisy Boris Johnson dia mety hanaiky ny teti-pitsarana momba ny pasipaoro fanaovana fitsapana amin'ny alatsinainy 5 aprily 2021.
Na dia azo ekena aza ny pasipaoro fanaovana vaksiny ho an'ny dia iraisam-pirenena, dia takiana amin'ny fanoherana izany ny fepetra takiana amin'ny hetsika anatiny.
Ny pasipaoro anatiny dia mitaky fanamarinana hidirana amin'ny toerana toy ny trano fisotroana, trano fanaovana teatra, trano fandihizana, ary kianja, ohatra.
Ny praiminisitra Boris Johnson dia afaka manambara amin'ny Alatsinainy raha toa ka hisy fampiharana pasipaoro vaksiny anatiny hampiharina na tsia.
Misy ny fikomiana ataon'ny antoko ankolafy - zavatra izay tsy dia mitranga matetika any Angletera - manohitra ity tetik'asa ity miaraka amina mpikambana 70 mahery ao amin'ny Parlemanta (MP), ao anatin'izany ny mpikambana 41 ao amin'ny antoko Conservative eo amin'ny fitondrana, sy ireo mpiara-miasa manao sonia fanambarana iraisana mba handray mijoro manohitra ny pasipaoro vaksiny anatiny COVID-19 UK.
Ny mpanao sonia malaza tamin'ny fanambarana ny fanoherana dia nahitana ny mpitarika ny Antoko Conservative teo aloha Iain Duncan Smith, ny mpitarika ny Antokon'ny Asa teo aloha Jeremy Corbyn, ary ny mpikambana 40 ao amin'ny COVID Recovery Group - firaisana tsy ara-dalàna ataon'ireo mpikomy mpikomy nifidy ny antoko Ny fanidiana faharoa an'ny UK.
Ny pasipaoro fanaovana vaksinin'ny vaksiny ao anatiny dia mitaky adidy amin'ny olona hiditra amin'ny toeram-pivarotana toy ny fivarotana, trano fisotroana, alim-pandihizana, trano fijerena sarimihetsika ary kianja rehefa manomboka manamaivana ny fameperana fanidiana fanidiana fahatelo ny firenena.
Na dia mbola tsy nisy ny fanapahan-kevitra farany, dia mbola misy ny fanantenana hatolotry ny PM Johnson ny fizahan-toetra momba ny vina fanombohana manomboka amin'ny teatra sy kianja amin'ny Alatsinainy.
Ny fanambarana iraisan'ny Mpikambana ao amin'ny Parlemanta sy ny mpiara-miasa dia mivaky toy izao: "Manohitra ny fampiasam-panjakana fanavakavahana ny mari-pahaizana momba ny COVID izahay mba handavana ny fidiran'ny tsirairay amin'ny serivisy, orinasa, na asa ankapobeny." Ny fanambarana dia navoaka niaraka tamin'ny fanohanan'ny vondrona fahalalahana sivily Liberty, Big Brother Watch, ny Joint Council for the Welfare of Immigrants (JCWI), ary ny Privacy International.
Ny sasany amin'ireo izay nanao sonia ny fanambarana dia manahy ny amin'ny tranga mety hampidi-doza inoany fa ny pasipaoro vaksinin'ny COVID-19 dia napetraka ho an'ny zon'ny olom-pirenena. Ny mpitarika ny demokraty liberaly, Ed Davey MP, dia nilaza hoe: "Rehefa manomboka mifehy tsara an'ity virus ity isika dia tokony hiverina amin'ny laoniny ny fahalalahantsika. Ny pasipaoro fanaovana vaksinina, kara-panondron-tena ID COVID, mitondra anay any amin'ny lalana hafa. ”
Ny foibem-pizahantany Cox's Bazar dia nandidy ny hanidiana azy ireo tao anatin'ny fihenan'ny COVID
Ny Air Canada sy Transat dia mamarana ny fifanarahana fahazoana tombony